Iskuxirka Teknolojiyada Caalamiga ah (CTI) wuxuu abuuraa qalab wax ku ool ah oo ka caawiya bulshooyinka saboolka ah ee ku nool waddamada soo koraya inay ka gudbaan caqabadaha cunnada iyo biyaha. Waxay injineer u adeegsadaan beeraleyda yaryar ee ku nool bulshooyinka reer miyiga - koox ka kooban qiyaastii 75% saboolka adduunka. CTI waxay awood siineysaa beeralleydan, oo badankood dumar yihiin, oo leh aalado la awoodi karo oo kor loogu qaadayo tayadooda biyaha, wax soo saarka cuntada, iyo dakhligooda.
CTI waxay hesho mashruuca maalgalinta iyada oo loo marayo Barnaamijka Cilmi-baarista Xoolaha ee McKnight ee Barnaamijka Cilmi-baarista Cagaaran (CCRP) si ay uga caawiso beeraleyda in ay kor u qaadaan waxtarka iyo qiimaha wax soo saarka cuntada iyo nafaqeynta carruurta ee Malawi iyo Tansaaniya. Mashruucani wuxuu la jaanqaadayaa hadafka McKnight ee ah in uu raadiyo xalal loogu talagalay nidaamyada raashinka ee degaanka ah, iyada oo maalgalinaysa cilmi-baarista iskaashi ee u dhexeeya beeralayda yaryar, cilmi-baarayaasha maxaliga ah, iyo xirfadleyda horumarinta.
CTI waxay awood u siisaa beeralayda, kuwaas oo intooda badan ay yihiin haween, oo leh qalab qiimo leh oo hagaajiya tayada biyaha, wax soo saarka cuntada, iyo dakhliga.
CTI waxay iskaashi la lahayd Jaamacada Sokoine ee Beeraha iyo Machadka Cilmi-baarista Caalamiga ah ee Tropics ee Tansaaniya si loo hagaajiyo waxsoosaarka soosaaridda. Kooxdu waxay la kulantay beeraleyda Malawi iyo Tansaaniya si ay u aqoonsadaan habka soo saarka ee u baahan horumarinta. Waxay ogaadeen in kor u qaadista, xoqista, iyo duqeyntu ay ahaayeen mudnaanta. CTI waxay bilowday iyadoo diiradda saareysa geeddi-socodka qaloocinta oo ay ku uruurisay koox cilmi-baaris si ay u baaraan tiknoolajiyada hadda jira oo hagaajin kara nidaamka. CTI waxa ay heshay saddex naqshadood oo suurtagal ah waxayna u keentay Malawi inay tijaabiso. Marka lagu daro ururinta xogta tirakoobka waxqabadka qalabka, CTI waxay raadinaysay jawaab celin ka timid beeralaydii ay hore u wareysigey.
Madaxa Wakiilka Hawlaha Batroolka ee CTI, Bert Rivers, ayaa sheegay in khibrada, "Beeralaydu aad bay u farxeen. Waxaan rajeyneynay sannadkii hore markii aan ka soo ururinnay macluumaadka iyaga oo aan dib ugu soo noqonay qalab waxaanan sameynay. Waxaan xajinay ballanteena. "
CTI iyo kooxdu waxay sii waday inay la shaqeeyaan beeraleyda si ay u qiimeeyaan naqshadeynta, hubinta in horumarka uu ka dhex abuuray iskaashi dhab ah oo u dhexeeya ururka iyo beelaha ay u adeegto.